7th Myamar ICT Exhibition May-2011
Date : From 20-May-2011 (Friday) to 22-May-2011 (Sunday)
Place : TutMaDaw Exhibition Hall, U WiSara Road, Dagon Township
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း မှ MCPA Certified Network Associate Exam Preparation (Intensive Course ) ဖွင့်မည်။
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း အသိအမှတ်ပြုစာမေးပွဲများကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လ (၁၉) ရက်တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါစာမေးပွဲများသည် Professional နယ်ပယ်သို့စတင် ဝင်ရောက်သူများအတွက် အဓိက လိုအပ်သော... Read more
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ 7th Myanmar ICT Exhibition 2011 တွင် Booth No- ( K-20 ) တွင် ပါဝင်ပြသမည်
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ 7th Myanmar ICT Exhibition 2011 တွင် MCPA ၏ သတင်းနှင်. Information အတွက် Booth No- ( K-20 ) တွင် 20.5.2011 မှ 22.5.2011 အထိပါဝင်ပြသမည် ဖြစ် ပြီး ပြပွဲ အတွင်း... Read more
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း အသိအမှတ်ပြုစာမေးပွဲများ ကျင်းပမည်
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ အသိအမှတ်ပြုစာမေးပွဲများကို ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းနှင့် အသင်းခွဲများရှိရာ မန္တလေးတိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊... Read more
“Advances and Future Prospects in Visualizations and Simulations: A career-oriented perspective” ဟောပြောပွဲ ကျင်းပမည်
သတင်းအချက်အလက် နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင် အသင်း (MCPA) မှ ကြီးမှုး၍ Myanmar World Distribution မှပံပိုးကူညီ၍ ၂၀၁၁ ပြည့်နှစ်၊ မေလ (၆) ရက် (သောကြာနေ... Read more
MCPA Developer Conference 2011 အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို download ရယူနိုင်
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူး၍ ပထမအကြိမ် Developer Conference (Dev Con 2011-Yangon) ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ (၂၀) ရက်မှ (၂၁) ရက်နေ့အထိ ရန်ကုန်မြို့ မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ်တွင် ကျင်းပမည်ြ... Read more
MCPA မှ မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ဆုတောင်း ( Happy Myanmar New Year 2012 )
မင်္ဂလာရှိသော ဒီမြန်မာနှစ်သစ်ကူးမှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင် အသင်း (MCPA) မှ ဥက္ကဋ္ဌ နှင်. တကွ အလုပ်အမူဆောင်များ၊ အသင်းဝင် အသင်းသား များမှစပြီး မြန်မာသူ မြန်မာသား အားလုံး၊ ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားအားလုံး၊... Read more
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာ ပညာရှင်အသင်းမှ 2011 Developer Conference (Dev Con 2011 –Yangon ) အတွက် Logo Design ပြိုင်ပွဲဝင်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာ ပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူး၍ ပထမအကြိမ် Developer Conference ( Dev Con 2011 –Yangon) ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ (၂၀) ရက်မှ (၂၁) ရက်နေ့အထိ ရန်ကုန်မြို့ မြန်မာ အင်ဖိုတက်ခ်တွင် ကျင်းပမည်ြ... Read more